जनतापाटी बुधबार, जेठ २६, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको सुन्दरनगरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र स्थानीयबीच बढेको विवाद तत्कालका लागि समाधान गरिएको छ । दुबै देशको सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीहरुको संयुक्त छलफलबाट बुधबार विवाद समाधान गरिएको हो ।
एसएसबीले अधिकारी परिवारले बेसार खेती लगाउँदै आएको क्षेत्र दशगजा क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरेको छ । अधिकारी परिवारले भने जग्गाधनी पूर्जा भएर खेतीपाती गर्दैै आएको बताएका छन्। गत वर्ष सीमा क्षेत्रमा रहेका दुबै देशका नागरिकलाई दशजगा क्षेत्र छाडेर खेती गर्न दिने सहमति भएपनि भारतीय एसएसबीले सिधै नेपालीको खेतमा आएर अवरोध गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
यसैगरी, भीमदत्त नगरपालिका-९ ब्रम्हेदमा निर्माण भइरहेको बाह्य चक्रपथस्थित कल्र्भट निर्माण र बेलौरी नगरपालिकाको भुडामा हुलाकी राजमार्गमा कालोपत्रे गर्ने कार्यमा समेत भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गर्दै आएको छ ।
एकैपटक ५२ एसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [नामावलीसहित]
नेपाल प्रहरीका ५७ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ?
नेपाल प्रहरीका १५ एसएसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
नेपाल प्रहरीका १६ डिआईजीको सरुवा, सिआईबीमा सिंह [सूचीसहित]
काठमाडौं उपत्यकाका सिडिओहरूकाे बैठक बस्दै, निषेधाज्ञा थप्ने तयारी